यि ट्राफिक जसले भारतदेखि फर्किदै गरेका यात्रुको पैसा लूटिनबाट जोगाए, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/यि ट्राफिक जसले भारतदेखि फर्किदै गरेका यात्रुको पैसा लूटिनबाट जोगाए, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !
यि ट्राफिक जसले भारतदेखि फर्किदै गरेका यात्रुको पैसा लूटिनबाट जोगाए, सम्मान स्वरूप शेयर गरौ !
नेपालगन्जको पुष्पलाल चोकमा ट्राफिक प्रहरीले एक जना पाकेटमारलाई पक्राउ गरेको छ।
दिउँसो ४ बजे नेपालगन्जदेखि जाजरकोट जादै गरेको बसमा जाजरकोट जुनिचादे ११ का काली बहादुर कसेराको साथमा रहेको २१००० रुपैयाँ चोरी गरेको हरी बहादुर कठायतलाई ट्राफिक प्रहरीका हवल्दार राम बहादुर बिष्ट र ट्राफिक प्रहरी जवान गेहेन्द्र केसीले नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएका थिए ।
ज्योतिषका अनुसार सोमबारको कारक ग्रह चन्द्र हो र यसको स्वामी शिव हो। त्यसैले यो दिन चन्द्र र शिवसँग जोडिएका उपाय अप्नाउनु पर्दछ। शिव पुराणका अनुसार यो दिन ब्रत राख्दा र भगवान शिवको पुजा गर्दा विभिन्न किसिमका समस्या हट्ने गर्दछन्।
साथै परिवारमा सुख सान्ति भइरहन्छ। दुर्घटनाको योग र मृत्यु भयबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ। ज्योतिषाचार्य मनिष शर्माका अनुसार सोमबार कुन कुन उपाय अप्नाउदा शुभ फल प्राप्त हुने गर्दछ।
यसरी गर्नुहोस् विशेष पुजा
शिव मन्दिरमा गएर शिवलिंगमा दिप बाल्नुहोस् र ऊँ सांब सदा शिवाय नमः मन्त्रको जप १०८ पटक गर्नुहोस्। यसका लागि रुद्राक्षको माला प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
शुद्ध जलमा गंगाजल र दूध मिलाएर शिव लिंगमा चढाउनुहोस्।
जल चढाउने समय ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्नुहोस्।
त्यसपछि भगवानलाई चन्दन चढाउनुहोस्।
बेलपत्र, धतुरो पनि शिव लिंगमा चढाउनुहोस्।
यसरी भगवानलाई पुजा सामाग्री चढाएपछि ओम नमः शिवाय मन्त्रको १०८ पटक जप गर्नुहोस्।
त्यसपछि भगवानलाई मिठाइ चढाएर भक्तजनलाई बाढ्नुहोस्।
पाँच तारे होटल आइसाेलेसनमा बसेर जनतालाई ढाँटे काठमाडौंका मेयरले
विश्वकै चर्चित मेडिकल जर्नलले भन्यो : रसियाले बनाएको कोरोना बि’रुद्धको खोप सफल
आजदेखि जोर-विजोर प्रणालीमा निजी सवारीसाधन सञ्चालन, अर्को जिल्ला जान प्रतिबन्ध
सांसद गिरीसहित ६० लाख भारतीयको नागरिकता खा’रेज गर्न अ’भियान्ता अधिकारीको माग जानकारीको लागी शेयर गरौँ